उहानमा फसेका भारतीयलाई उद्धार गर्न एयर इन्डियाको विमान चीनमा, नेपालीलाई कहिले ल्याउने ? – Health Post Nepal
२०७६ माघ १७ गते १९:१०
भारत सरकारले कोरोना भाइरसले आक्रान्त चीनको उहान राज्यमा फसेका करिब ४ सय भारतीयलाई उद्धार गर्न विमान पठाएको छ । शुक्रबार चीन पठाइएको एयर इन्डियाको बोइङ ७४७ विमानले शनिबार उहानमा फसेका भारतीयलाई एयरलिफ्ट गर्ने बताइएको छ ।
एयर इन्डियाका प्रबन्ध निर्देशक अश्विनी लोहनीले विमान शनिबार राति २ बजे भारत फर्किने जानकारी दिए । उनका अनुसार फ्लाइटमा विमानमा ५ विशेषज्ञ चिकित्सकको टोलीसमेत हुनेछ । भारतमा र भारतबाहिर रहेका भारतीयमा पनि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ ।
उद्धार गरिएका भारतीयलाई एक सातासम्म निगरानीमा राखिने भारत सरकारले जनाएको छ । उनीहरूलाई राख्न हरियाणाको मानेसरमा भारतीय सेनाले ३०० बेडको शिविर तयार गरेको छ । सुरुमा विमानस्थलमै सबैको विशेषज्ञ चिकित्सकमार्फत स्क्रिनिङ गरिने र शिविरमा लगिने बताइएको छ । चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा एक साता राखेर संक्रमण नभएको पुष्टि भएपछि मात्र घर पठाइने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
यसअघि संयुक्तराज्य अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई एयरलिफ्टिङमार्फत स्वदेश फर्काइसकेको छ । अन्य विकसित मुलुक पनि आफ्ना नागरिकलाई भाइरसप्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गर्ने क्रममा छन् ।
नेपाल सरकारले पनि उहानमा फसेका नेपालीको एयरलिफ्टिङमार्फत उद्धार गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । उहानमा रहेका नेपालीले सरकारले विमानको व्यवस्था गरेमा आफूहरू भाडा तिरेर फर्किन तयार भएको बताउँदै आएका छन् । अघिल्लो सातादेखि नै उनीहरूले सरकारसित उद्धारको अपिल गरिरहेका छन् ।
उहानमा करिब सयजना नेपाली फसिरहेको सरकारले पुष्टि गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय तथा चीनस्थित नेपाली दूतावासले ९६ जना नेपाली सम्पर्कमा रहेको बताएका छन् । उनीहरू विच्याट ग्रुप तथा अन्य सञ्चारमाध्यममार्फत नियमित सम्पर्कमा रहेको दूतावासको भनाइ छ । हालसम्म चीनमा कुनै नेपालीमा भाइरसको संक्रमण नभएको दूतावासले जानकारी दिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनबाट नेपालीको उद्धारका लागि सरकार तयार रहेको बताउँदै आएको छ । आवश्यक सबैखाले सहयोगका लागि सरकार तयारी अवस्थामा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, आफ्ना नागरिकलाई प्रभावित क्षेत्रबाट स्वदेश फिर्ता ल्याउन ठोस पहल भने गरिएको छैन ।
‘ग्लोबल इमर्जेन्सी’ घोषणा, स्वास्थ्य सुविधा कम भएका मुलुकमा भाइरस फैलिने चिन्ता : डब्लुएचओ प्रमुख टोड्रोस
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले शुक्रबार कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई लिएर विश्व जनस्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गरेको छ । यद्यपि, डब्लुएचओले चीनको यात्रा र कुनै प्रकारको व्यापारिक गतिविधिमा भने रोक लगाएको छैन ।
यसअघि गत साता डब्लुएचओले कोरोना भाइरस चीनका लागि मात्र आपत्काल भएको तर बाँकी विश्वका लागि ‘इमर्जेन्जी’को आइनसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । एकपछि अर्को देशमा संक्रमण फैलिँदै गएपछि डब्लुएचओ ‘ग्लोबल इमर्जेन्सी’ घोषणाको निर्णयमा पुगेको हो ।
डब्लुएचओ प्रमुख टेड्रोस एडनोम गेब्रियेसिसले स्वास्थ्य सुविधा कम भएका मुलुकमा भाइरस फैलिने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘ग्लोबल इमर्जेन्सी’ घोषणापछि त्यस्ता देशमा भाइरस फैलनबाट रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको उनले बताए । चीनले भने आफू भाइरसविरुद्ध लड्न पूर्णतः सक्षम रहेको बताएको छ ।
चीनमा भाइरसको चरम भय, प्लास्टिकका कन्टेनर र हेल्मेट पहिरेका तस्बिर भाइरल
चीनमा भाइरसको भय अत्यधिक बढेको छ । तीव्र गतिमा फैलिरहेको भाइरसको संक्रमणबाट मुत्युको संख्या पनि त्यही रूपमा बढिरहेको छ । उहानलगायत प्रभावित सहरका मासिन सकेसम्म घरबाट निस्किएका छैनन् । अति आवश्यक परेको अवस्थामा निस्किएकालाई हेर्दा भाइरसको चरम त्रास देख्न सकिन्छ । उनीहरू भाइरसबाट बच्न हरसम्भव उपाय अपनाउँदै गरेका देखिन्छन् ।
मासिनहरू प्लास्टिकका कन्टेनरले समेत मुख तथा शरीर ढाकेर हिँडिरहेका देखिन्छन् । हेल्मेट लगाएर हिँड्ने पनि उत्तिकै छन् । बचाउका अनौठा उपायहरू अवलम्बन गरिरहेका मानिसको तस्बिर सामाजिक सञ्चालहरूमा भाइरल भइरहेका छन् । मास्कको प्रयोग नगर्ने मानिस भेटिन छाडेका छन् । उहानलाई सिल गरिएकाले कसैले पनि सहर छोड्न पाएका छैनन् ।
‘ग्लोबल इमर्जेन्सी’ले के हुन्छ ?
विश्व स्वास्थ्य आपत्काल घोषित भएसँगै कोरोना भाइरससित लड्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रयास तीव्र बनाइनेछ । भाइरस फैलिन नदिन डब्लुएचओले सबै देशसित समन्वय गरी आगामी रणनीतिमा काम गर्नेछ । सबै देश एक–अर्कासित समन्वय गरी रोगविरुद्धको अभियान तीव्र बनाउन लागिपर्नेछन् ।
योसमेत अहिलेसम्म ६ पटक ‘ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी’ घोषणा गरिएको छ । सन् २००९ मा पहिलोपटक ग्लोबल हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरिएको थियो । त्यतिवेला इन्फ्लुएन्जाको महामारी फैलिएको थियो ।
सन् २०१४ मा दुईपटक ग्लोबल हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरियो । त्यतिवेला कैयौँ देशमा पोलियोको पुनरुत्थान भएको थियो । पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नाइजेरियालगायत देशमा पोलियो खतराको अवस्थामा देखिएको थियो । त्यसै वर्ष पश्चिमी अफ्रिकामा इबोलाको महामारी फैलिएपछि दोस्रोपटक ग्लोबल हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरियो ।
सन् २०१६ मा जिका भाइरसले महामारीको रूप लिएपछि ग्लोबल हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरिएको थियो । सन् २०१९ मा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कंगोमा इबोलाले प्रकोपको रूप धारण गरेपछि ग्लोबल हेल्थ इमर्जेन्सी घोषणा गरियो ।
६ ‘ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमर्जेन्सी’
कहिले ? किन ?
सन् २००९ – इन्फ्लुएन्जा एच१एन१को महामारी
सन् २०१४ – पोलियोको पुनरुत्थान
सन् २०१४ – पश्चिमी अफ्रिकामा इबोलाको महामारी
सन् २०१६ – जिका भाइरसको महामारी
सन् २०१९ – कंगोमा इबोलाको प्रकोप
सन् २०२० – चीनमा नेवेल कोरोना भाइरसको महामारी, नेपालसहित २० देशमा संक्रमण